Bonke abazali bazibuze izingane bavikele noma ikuphi ukonakaliswa. Futhi, nokho, Ukuvikelwa ukulwa namagciwane namagciwane ayingozi akuzona njalo ngempumelelo. sinusitis Evamile, pharyngitis, rhinitis, nezinye izifo eziningi zibangelwa isifo ipheshana zokuphefumula, ngokuvamile yashubisa amagciwane ayingozi kungenziwa wahlulwa kuphela ngokusebenzisa imithi elwa namagciwane eqinile. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa esinjalo ukukhathazeka esasiwafanele kwabazali odokotela.
ezithela ezinhle kulezi zimo babe izidakamizwa "Izofra" izingane. Kuhlanganisa kahle kungase kutholakale amagciwane-antibiotic - framitsin, okuvumela ukuba athole imiphumela emihle ekulweni ukuvuvukala ezithathelwanayo, elwa namagciwane kanye yegciwane elingenhla zokuphefumula izifo irherho, kufaka esikhathini exacerbation. Kusho kungokwalabo iqembu aminoglycosides, aphikisana nazo ekuthuthukiseni amagciwane Gram-HIV futhi Gram-ezazingezinhle kuvusa isifo engxenyeni engenhla umgudu wokuphefumula. Ukusebenzisa izidakamizwa ulungisiswa eyenzelwe izingane ezineminyaka engu eminyakeni eyodwa nengxenye, kodwa ezifo ezinzima ezinsaneni, ukusetshenziswa kwaleli thuluzi futhi wabonisa imiphumela emihle kakhulu.
Agent isetshenziswa kuphela futhi njengengxenye ukwelashwa ekwelapheni ezithathelwanayo - Izifo ukuvuvukala zezitho engenhla umgudu wokuphefumula. Futhi ngenxa ukwelashwa kanye nokuvimbela izimo ukuvuvukala in iziguli esikhathini postoperative.
"Izofra" izingane itholakala ifomu elula isifutho acinene, okuvumela ukusetshenziswa kwezidakamizwa njalo. Spray ngokulinganayo basakaza phezu lonke acinene ingaphakathi ingane, ngaphandle overdosing futhi ngaleyo ndlela zokusheshisa, izinyane yokutakula. Ngenxa isenzo endawo lo muthi engazweli equkethe, ukumuncwa izinto eziyingozi lincishisiwe. isikhathi esigcwele yokutakula kakhulu ziyancipha. yokutakula Okugcwele kwenzeka ngezinsuku 5-6 spray isicelo.
It nanela ukuthi ukusetshenziswa esebenzisa izinsuku ezingaphezu kwezingu-7, kwandisa isibalo amagciwane akwazi ukuba amelane nemithi elwa yaleli qembu, ngaphezu, kwalo kungukuchotshozwa microflora yemvelo ngalo ingaphakathi acinene. Ngaphambi ukwelashwa, ingane izidakamizwa "Izofra" yokusetshenziswa okufanele Kwenziwe. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungaqiniseka ngokuthi umuthi ngeke ukulimaza umzimba wakho umntwana.
Kunconywe nokusetshenziswa "Izofra" izingane - izikhathi 3 ngosuku. Kumelwe sikhumbule ukuthi ngaphambi kokusebenzisa isifutho, kufanele kahle ukuhlanza itjhubhu ingane ibhodlela futhi uyigcine ime mpo, kuyilapho okwenza umuntu umjovo acinene. Against isizinda izidakamizwa, ezimweni ezingajwayelekile, kungaba nemiphumela uhlangothi njengoba ububomvu ukukhanya ekhaleni, ukulunywa, ukuqubuka. Lapho ukubonakaliswa side effects izidakamizwa kufanele ngokushesha yeka uxhumane nodokotela wakho iseluleko okwengeziwe noma izibuyekezo isu ukwelashwa.
Umuthi is contraindicated nezingane idiosyncrasies ngabanye (nokungababekezeleli) aminoglycosides futhi framycetin, isakhi esiyinhloko esebenzayo ye spray. Gwema ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa nezinye imithi elwa namagciwane okuqondene iqembu aminoglycosides ngenkathi siwasebenzise endlini sinuses. izidakamizwa engeziwe ayinakho Izimo, kanye nokusebenzisa kwayo kunikeza nomphumela ofiselekayo. Njengoba nje isimo somntwana kuyathuthuka, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kungenziwa kumisiwe.
okubuyayo ezivela kubazali abaye kakade ngcono ezinganeni zabo, yebo, uyigugu, kodwa ngaphambi kokuba uqale usebenzisa isifutho "Izofra" izingane, kufanele ubone onguchwepheshe. Lokhu kuyadingeka ukunquma ngokunembile kobukhulu, ubude kanye umthamo we izidakamizwa. Khona-ke ukuhlola ngokucophelela 'Izofra "incazelo imfundo, bese kuphela isicelo.
Indlela yokwenza "Ukusetha kabusha kanzima" ku "Android"?